Igama likaLeonid Arnoldovich Fedun sekuyisikhathi eside lihlotshaniswa ne FC FC Spartak. Eminyakeni engaphezu kwengu-13, lo muntu ungumnikazi weqembu. Wenze okuningi ekuthuthukiseni "u-Spartacus", yilokho okwenza ukuba adume kakhulu. Kodwa-ke, ngaphezu kwemisebenzi yebhola, ubelokhu engumengameli wenkampani yamafutha eLukoil iminyaka engaphezu kwengu-20.
Mayelana nomsebenzi wezempi
ULeonid Arnoldovich Fedun wazalwa ngo-Ephreli 5, 1956 eKiev. Ubuntwana bakhe basebenza eKazakhstan, lapho ubaba wakhe, udokotela ohlinzayo wezempi kanye nesisebenzi esithunyelwa khona. Umfana waphefumulelwa umkhathi waseBaikonur futhi, njengoba kulula ukuqagela, wanquma ukuqala umsebenzi wezempi.
Kusukela ngo-1972 kuya ku-1977, uFedun wafunda esikhungweni sezombusazwe se-Rostov Higher Military Command School of Strategic Missile Forces. Wabe esengena esikhungweni se-Military Academy okuthiwa u-FE Dzerzhinsky, ngemuva kwalokho wavikela lo mkhakha othi "Umbono womphakathi wamasosha njengento ebalulekile ekuqiniseni impi yombuso wabantu", waba ngumfundi wesayensi yefilosofi. Ukuvikela ozobhapathizwa, wafundisa isayensi yezombangazwe iminyaka engu-8. Phakathi nalesi sikhathi, uLeonid Arnoldovich wathola isikhundla se-colonel.
Ukuqashelwa nenkampani yamafutha
Ngaphezu kokufundisa e-Institute, uLeonid Arnoldovich ufundiswe kulo lonke-Umphakathi weNhlangano "Ulwazi". Ngo-1987, wathunyelwa enkampanini eya emzaneni wamafutha waseKogalym. Ngenye yezinkulumo, ingqondo kanye nesitimela somcabango wothisha osemusha babe nesithakazelo kubamele beenkampani yamafutha eKogalymneftegaz. ULeonid Fedun wamenywa emhlanganweni emva kwenkulumo, futhi phakathi kwengxoxo eyalandela intshiseko yakhe yembonini yamafutha yabonakaliswa, lapho ayeyihle khona. Esikhathini esithile emva kwengxoxo, uLeonid Arnoldovich wathola isiphakamiso somsebenzi ovela ku-CEO yenkampani. Ngaphezu kwalokho, uFedun akazange acabange isikhathi eside futhi, eqinisweni, wavuma.
Enkampanini yamafutha, uLeonid Arnoldovich wajoyina umsebenzi kanye neqembu elisha ngokushesha. Ngenxa yokuhlakanipha kwakhe nokukwazi ukuhlaziya, kwaqokwa ngabaphathi, kwathi lapho ngo-1990 umqondisi jikelele weKogalymneftegaz wamiswa iphini likamphathiswa we-oil and gas industry ye-USSR futhi wathuthela ibhizinisi eMoscow, uLeonid Arnoldovich wahamba naye.
Ngemva konyaka eMoscow, ngo-1991, kwaqala ukukhathazeka kweLukoil. ULeonid Fedun uthathe ingxenye ebalulekile kulokhu futhi waphumelela. Ngo-13 Mashi 1994, wanikezwa ukuthatha isikhundla se-vice-president we PJSC "LUKOIL".
Emandleni amasha, wagxila ekuqondiseni ukuthuthukiswa kwezinkampani. Amaningi wezinhlelo zikaL.Fedun aziswe emisebenzini yebhizinisi laseRussia okokuqala.
Mayelana ne FC "Spartak"
Umuntu akakwazi ukusiza kodwa ukutshela ngomnikelo kaLeonid Arnoldovich Fedun ekuthuthukisweni kwe FC "Spartak", abathandekayo abaningi. Wathola uStartak kumnikazi wangaphambilini, u-Andrei Chervichenko, ngo-2004 ngo-$ 70 million. Kwaphela iminyaka engaphezu kwengu-13 wayengumnikazi weqembu kanye nomxhasi walo. Njengamanje, uLeonid Arnoldovich ube ngumsomali oyinhloko ka "Spartacus" futhi futhi ukhathazekile ngeqembu, njengangaphambili, njalo ukuya emidlalweni.
Politics of Fedun
Ukuthuthukiswa kwezinkampani zebhola ngokuyinhloko kuxhomeke ekusekeleni kwezezimali. Kuwo wonke umsebenzi we FC FC Spartak, iFedun igcwalise amaphrojekthi amaningi amqoka. Ukukhethwa kwabadlali kuleli qembu, wenza ngokusho kwenqubomgomo yokudlulisa, ezama ukuthola ukwakheka okuhle. Akazange akhohlwe ngekusasa - wabeka imali ekuthuthukiseni ibhola lezingane, ithemba lethu lekusasa. Wayekhathalela induduzo yeqembu, eqinisekisa ukwakha inkundla yasekhaya "I-Opening-Arena". Amasiko ase-Coast - adala iminyuziyamu ethi "Spartacus", "Hall of Fame."
Kwenzekani njengomphumela? Ngokusekelwa kukaLeonid Fedun, inkundla yasekhaya ye FC "Spartak" - "i-Opening-Arena", ensimini yayo i-museum esebenzayo, yavulwa. Ithimba elimangalisayo likhethiwe, okwamanje liqeqeshwa nguMassimo Carrera. E-Sokolniki, i-Academy "Spartacus" ivuliwe, lapho abadlali abasha baqeqeshwa khona. Futhi kunomphumela - ngesikhathi sonyaka 16/17 weNkulumbuso League ekuqaleni kukaNovemba 2016, "u-Spartacus" usevele eqala kuqala, ngaphambi kweZenit ngamaphuzu amathathu. Futhi ukunqoba okulindelwe isikhathi eside ku-"Spartak" derby-CSCA ngasekupheleni kuka-Okthoba nge score of 3: 1 abalandeli ngeke nakanjani ukhohlwe.
ULeonid Arnoldovich Fedun kusukela ebuntwaneni wayevezwe ngokubekezela nangengqondo ehlukahlukene enokuzibuza. Ngaphandle kwebhizinisi nebhola, uthanda i-tennis nomculo. Akunakwenzeka ukukhuluma ngecala lobuciko lomuntu - uFedun uqoqa imidwebo kaNicholas Roerich.
Indlela ukuhlanza alimondi ehlutshiwe? amathiphu Ukupheka. Indlela ewusizo walnuts alimondi?